‘कच्चा पदार्थ समयमै नपाउँदा काम गर्न समस्या’ | Chhinchhin Khabar
‘कच्चा पदार्थ समयमै नपाउँदा काम गर्न समस्या’
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार २१:०८
अध्यक्ष, बाँके निर्माण व्यवसायी संघ
निर्माण व्यवसायमा कसरी लाग्नु भयो ?
२०५८ सालमा लाइसेन्स दर्ता गरे पनि २०६१ सालदेखि सक्रिय रुपमा निर्माण व्यवसायीमा क्रियाशील छु । निर्माण व्यवसायीमा आउनु भन्दा पहिले मैले सिभिलतर्फ सिटिइभिटीको १८ महिने कोष पूरा गरीसकेपछि पढाइ अनुरुपको काम गर्न यस क्षेत्रमा लागेको हुँ ।
व्यवसायीलाई काम गर्दा आइपर्ने समस्या के-के छन् ?
हामी व्यवसायीलाई काम गर्दा चाहिने कच्चापदार्थ समयमै उपलब्ध हुँदैन । जस्तै हाम्रो टेण्डर प्रक्रिया अनुरुप काम गर्नका लागि असार–साउनमा हुने खोला नाला बन्दले गर्दा ढुङ्गा, बालुवालगायतका पदार्थ सहजै पाउँदैनौं । जसले गर्दा हामीहरुले समयमै काम गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । त्यस्तै राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ । ठूला व्यवसायीलाई राज्यले मूल्य वृद्धि अनुरुपको बजेट दिने गरेको छ भने साना व्यवसायीलाई मूल्य वृद्धि अनुसारको बजेट दिँदैन । जस्तै ठूला व्यवसायी र साना व्यवसायीले आवश्यक निर्माण सामग्री एउटै ठाउँबाट लिए पनि राज्यले साना र ठूला व्यवसायीबीच असमानताको रेखा कोरिदिँदा हामी व्यवसायी ठूलो मर्कामा परेका छौं । साथै हामी व्यवसायीले आफ्ना स्रोत साधन प्रयोग गरे पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका सामग्री ल्याउन नपाइरहेको अवस्था छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले व्यसायीले धेरै समस्या झेल्दै आइरहेका छौं । पुल निर्माण, बाटोघाटो निर्माणका काममा हामी अहोरात्र खटिनु पर्ने अवस्था छ । र, सबै ठाउँ सुरक्षा निकाय नहुँदा रातबिरातमा सहजै हिँड्डुल गरेर काम गर्दा हामीले ठूलो जोखिम मोलेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । विभिन्न समयमा हामीलाई भूमिगत समूहलगायत, चुल्ठेमुल्ठे गुन्डाहरुले काम गरेबापत चन्दा भनौ वा लेबी नबुझाए यहाँ काम गर्न दिँदैनौं भनेर डर धम्की दिइनै रहेका हुन्छन् । हामीले सुरक्षा निकायलाई भने पनि उहाँहरु हामीसँगसँगै हिँड्ने सक्ने कुरा पनि हुँदैन त्यसैले त्यस्ता समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न नसक्ने व्यवसायी जहिले पनि टार्गेटमै रहेका हुन्छौं । जसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो केन्द्रीय महासंघ अध्यक्षको पनि हत्या भएको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । समग्रमा हामी निर्माण व्यवसायीलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले ढुक्क बनाउन सुरक्षा निकायले त्यस्ता भूमिगत समूह, चुल्ठेमुल्ठे गुन्डा र सन्दिग्घन व्यक्तिलाई खोजी खोजी तह लगाए निर्धक्का साथ काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीको गलत क्रियाकलापका कारण समग्र यो क्षेत्र बद्नाम छ, यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
सबै भन्दा पहिले हामी व्यवसायी राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने मान्दछौं । कुनै कुनै निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नसक्नु वा कमसल काम गर्नुमा निर्माण व्यवसायी र राज्य दुवैको कमिकमजोरीका कारण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राज्यले व्यवसायीलाई पायक पर्ने नियम कानुन बनाएर अघि बढे निर्माणका काम पनि समयमै हुन्छन् भने एकाध ठाउँमा भएका कमसल काम पनि गुणस्तरीय नै हुन्छन् । राज्यले जति बिगो भयो त्यति ग्यारेन्टी थप्ने भएकाले साना व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको छ । ठूला व्यवसायीको तुलनामा साना व्यवसायीको सङ्ख्या धेरै भएको र साना व्यवसायीसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन लगायत कच्चा पदार्थ समयमै नपाउँदा समयमै काम गर्न सक्दैनन् । एउटा टेण्डर सम्पन्न नभएसम्म अर्को टेण्डरमा सहभागी हुन नपाउने नीति राज्य सरकारले ल्याइदियो भने एकातर्फ काम समयमै सकिन्छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरीय काम पनि हुन्छ ।
तपाईहरु सरकारी नीतिलाई बढी दोष देख्नुहुन्छ, गलत व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ यस्तो किन ?
हामी निर्माण व्यवसायीहरुले राज्यबाट दिइएको सेवासुविधा अनुरुप नै हेभी इक्विपमेन्टहरु ल्याएर आएका छौं भने गैर निर्माण व्यवसायीले पनि नाताबाद, कृपावादको आधारमा राज्य सरकारबाट दिइएको छुटका आधारमा जेसिभी, स्काभेटर, टिप्परलगायतका हेभी इक्विपमेन्ट ल्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेका छन् । हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभरलाई हामी व्यवसायीले १५–२० हजार रुपैयाँ दिएर काम गराइरहेका हुन्छौं भने उनीहरुले ४० हजार ५० हजार रुपैयाँ दिएर काम गराइरहेको अवस्था छ । त्यसैले राज्यले निर्माण व्यवसायीको वर्ग निर्धारण गरेर सीमित व्यवसायीलाई मात्र हेभी इक्विपमेन्ट ल्याउने व्यवस्था गराइ दिए राहत हुने थियो ।
निर्वाचन जितिसकेपछि समग्र व्यवसायीका समस्यालाई नेतृत्वले थाती राख्छ भन्ने आरोप छ नि ?
धन्यवाद धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । तपाईंले उठाएको प्रश्नमा सत्यता छ तर अब यस्तो हुँदैन । अहिले हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौं । पदाधिकारीका पहिलेका समस्यालाई समाधान गर्न खोजेर पनि संघको केन्द्रस्तरसम्म पहुँच नहुँदा त्यस्तो समस्या देखिएको थियो । अब संघीय संरचना अनुरुप प्रदेश सरकारसँग हाम्रो पहुँच सहजै हुनेलगायत अबको कार्य क्षेत्र पनि सीमित हुने भएकाले व्यवसायीका समस्या अवश्य सम्बोधन हुन्छन् भन्ने विश्वास हाम्रो कार्यसमितिले लिएको छ ।
आगामी दिनमा संघलाई कसरी लैजाने रणनीति बनाउनु भएको छ ?
हिजोका दिनसम्म हामीले केन्द्रीय महासंघको मुख ताकेर काम गरिरहेको अवस्था थियो । तर अब हामी सबै व्यवसायी संगठित भए एकजुट भएर अगाडि बढाउँछौं । पहिले एउटा व्यवसायीले बाटो पनि बनाएको छ यसैले पुल बनाएको छ, त्यही व्यवसायीले सिँचाइसम्बन्धी काम गरेको छ र त्यसैले भवन पनि बनाएको अवस्था थियो । तर, अब हामीले कार्यक्षेत्र विभाजन गरेर जसलाई जुन काममा विज्ञता छ, त्यसले त्यहीँ मात्र काम गर्ने नीति बनाउँदैछौं । जसले गर्दा राज्यको काम पनि समय सकिन्छ भने सम्बन्धित काममा विज्ञद्वारा गुणस्तरीय काम पनि हुनेछ । विज्ञता अनुसारको काम दिने सवालमा मलगायत हाम्रो कार्यसमिति पहल गर्नेछ र हामी यसकालागि लागिपर्नेछौं ।
निर्वाचनमा होमिनु भएका साथीहरुलाई धन्यबाद दिँदै जुन विश्वाससाथ मलाई अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा ल्याई पुर्याउनु भयो उहाँहरुको त्यस विश्वासलाई कायम राख्ने छु । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई स्वीकार्दै निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण साथीलाई सँगै लगेर अघि बढ्ने छु । संघको प्रगतिको लागि हामी सबै एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । सबै व्यवसायीको साथ र अमूल्य सुझाव बिना हाम्रो यात्रा अपुरो रहने भएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको गर्दछु ।
Previous articleबालबिबाह विरुद्ध जनप्रतिनिधिको सामुहिक प्रतिवद्धता
Next articleमेयर कपमा विभिन्न खेल सम्पन्न
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७० प्रतिशत अदक्ष, किन सीप सिक्न चाँहदैनन् युवा...
क्यान्सर अस्पतालको दुई करोड रकम उठेन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री,लालबाबुको भनाई